सुनतस्करीमा बामदेब गौतमको संलग्नता? बिमानस्थलमा प्रहरीले समातेको ३४ केजी सुन गौतमको हुनसक्ने!::त्रिशुलीखवर
सुनतस्करीमा बामदेब गौतमको संलग्नता? बिमानस्थलमा प्रहरीले समातेको ३४ केजी सुन गौतमको हुनसक्ने!
पुर्ब गृहमन्त्री बामदेब गौतम कै सेटिङमा पहिले देखी नै अवैध रुपमा सुन आयत हुने गरकेो बिभिन्न अनलाइन मिडियाहरुले बताएका छन । ३४ किलो सुन सहित पक्राउ परेका गोपाल शाहीले केही महिना यता ३ सय किलो सुन नेपालमा विमानस्थलबाटै ल्याएको बयान दिएपछि उक्त सुन तस्करीमा पूर्व गृहमन्त्री मन्त्रीको नाम फेरी पनि जोडिएको हो ।
तथापी कर्मचारी तन्त्रमा एमाले निकटको पकड भएकोले सुन तस्करीमा एमाले नेताहरुको संलग्नता नहोला भन्न भने सकिन्न ।